दाँतमा किरा लाग्यो ? यसो गर्नुहोस्… – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Tips/दाँतमा किरा लाग्यो ? यसो गर्नुहोस्…
पेटमा ग्यास जम्मा हुने, कफ जम्ने, खुट्टा बटारिनेजस्ता समस्या बेसारलाई नुनपानीमा घोलेर बिहान–बेलुका खाएमा ठीक हुन्छ । बिच्छी, बारुला, अरिंगाल आदिले चिलेमा सो ठाउँमा काँचो बेसारको लेप लगाउँदा आराम मिल्छ । त्यसैले बेसार छालाका लागि एकदमै उपयोगी हुन्छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **